Dhizaini Inowedzera Traffic 25%
Anoshanya kumusoro 25% Kubva Redesign
China, Kukadzi 10, 2011 Mugovera, October 29, 2011 Douglas Karr
Isu hatisati tine Martech Zone chaizvo nenzira yatinga vade nayo, asi dhizaini nyowani yave iri budiriro huru. Traffic kune ino saiti ine yakawedzera kupfuura 25% ne Kuongorora peji kumusoro kwe30%. Izvo hazvisanganise yekuwedzera traffic yatiri kusangana nayo kubva kutsva yedu tsamba yevhiki (nyorera pamusoro).
Dhizaini inogara iri underrated senzira yeku kuwedzera traffic kune yako saiti. Vanhu vasingashandise mari pane yakakura dhizaini kazhinji vanogara vachikakavadzana neni nezvekudyara muunyanzvi dhizaini. Hazvisi izvo chaizvo.
Dhizaini hombe ndeyekudyara kukuru mukambani yako. Shamwari yedu, Carla Dawson (4 Imbwa Dhizaini), Yakagadzirwa iyi iteration yeblog. Ndakakumbira chimwe chinhu chakachena chose chaisanganisira logo. Takaita zvigadziridzo zvakati wandei kubva patakatanga, asi iyo yakachena, yakajeka dhizaini ndizvo chaizvo zvataive tichitevera.
Isu takabatanidza WordPress's Post Thumbnail mune yedu blogging template uye akawedzera a plugin kuti iite otomatiki iyo post post kubva pamufananidzo wekutanga mune iyo blog positi. Nenzira iyi ini ndaisafanirwa kudzidzisa vese mabloggi maitiro ekushandisa chinhu icho.
Zvakare, dingindira rinosanganisira kushambadza kune simba kunoenderana nechikamu chemablog blog kana iwo makuru echikamu mapeji. Kana usati wazviongorora izvozvi, unogona kuona yega yega yezvikamu zvekutanga mukufambisa kukuru: Analytics, Blogging, Email Marketing, Mobile Marketing, Tsvaga Injini yekutengesa, Social Media Marketing uye Technology.
Mushure mekunge tisina kumbobvira tawana mutsigiri wepamutemo kare, isu takatovhara 2 kutsigira zvakare! Emailium iri kutsigira yedu Email Kushambadzira mbiru uye GetApp iri kutsigira zvigadzirwa zvedu zveTekinoroji! Kutenda kwakakosha kunoenda ku iSocket yeakanakisa ad manejimendi system.
Usatarisira pasi kudyara mukugadzirwa nyowani. Ndingafarire kukuudza kuti zvese zviri pamusoro pezviri mukati - asi chokwadi ndiyo nzira iyo zvemukati zvakagadzirwa uye kuratidzwa zvakatonyanya kukosha.
SEO Haimire neWako Saiti
Iyo huru yekubudirira nyaya! Ini ndinoda iyo nyowani dhizaini nenzira.
Ndatenda Brandon! Zvimwe munzira!
Kukadzi 19, 2011 na4: 12 PM
Ini ndichiri kujairira chitarisiko chitsva, nekuti ndainzwa kugadzikana nekwaive nezvinhu. Asi sezvo, 75% yevaenzi inowanzo kuve nyowani, zvinonyanya kukosha kuti vashanyi vatsva vakaita saiti, uye zvichibva pauri nhamba dzavari pachena!
Isu tiri pari zvino kugadzirisa patsva saiti yedu. http://www.roundpeg.biz uye tichave tichitarisa zvakadzama shanduko dzako kuti uone zvatinogona kudzidza kubva kwauri.